Maxay tahay deyn qaadashada? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks lacagta amaah
Maxay tahay deyn qaadashada?
Waa inaad amaahataa amaahda oo aadan ogeyn waxa kugu dhici doona? Ugu horreyntii, waa in la kala saaro waxa aad dhabta tahay iyo hawlaha aad rabto inaad ku dalbato amaahda. Amaah ayaa sidoo kale loo yaqaanaa amaahda waana markaad lacag ka hesho dadka kale sida bankiga. Hadda waxay noqon kartaa inaad rabto inaad isku filto oo aad rabto inaad codsato kobcinta ganacsiga bilowga. Waqtigan xaadirka ah ma aha oo kaliya lacag amaahashada, laakiin sidoo kale ku saabsan dulsaarka dulsaarka, qiimaha madax furashada iyo dakhliga. Waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid tan oo dhan deyn ahaan. Haddii aad rabto inaad amaan tahay, waa inaad had iyo jeer la hadashaa qof aqoon u leh mawduuca. Way fiicantahay haddii aad leedahay lataliye bangi oo aad ku kalsoon tahay, yaa ku siin kara talo iyo talo wanaagsan. Hadda, si kastaba ha ahaatee, waxaan ka hadleynaa dhabta dhabta ah lacagta amaah, Tani waxay noqon kartaa lacagta aad u baahan tahay. Haddii aad u malaynaysid inaad u baahan tahay euro 20.000, markaas waa wadarta deynta. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo soo socda.
Ka fikir qiimaha dulsaarka
Waa inaad bixisaa dulsaar. Markaas, bangiyada badankood waxay sidoo kale ku qulqusaan caymis deyn ah, waana in sidoo kale lagu daboolaa wadarta deynta. Heerka dulsaarku waxay badanaa leeyihiin heer go'an oo aad codsan kartid ka hor intaadan isticmaalin deynta. Waxaad arki doontaa in lagaa siiyo macluumaad ku saabsan tan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxa aad rabto inaad bilawdo lacagta. Waa inaad sidoo kale ogeysiiso isticmaalka loogu talagalay. Xaqiiqdu waxay tahay in maanta dukaamo badan ayaa la bixiyaa deyn iyo suurtogalnimadaas badanaa waa kan ugu dambeeya si uu u awoodo inuu wax ka helo. Shirkadaha gaar ahaan waxay xitaa sheeganayaan qadaro waaweyn waxayna doonayaan in ay yeeshaan deyn ku habboon. Deyntan waa mid waxtar leh oo waa in mar labaad la hubiyaa mar labaad. Waa inaad iska ilaalisaa deynta dhabta ah ee aad sidoo kale arki karto xiisaha. Kuwaas ayaa markaa yimaada deynka kor ku xusan. Soo jeedinta, waxaad arki kartaa faahfaahinta, haddii ay lagama maarmaan noqoto, weydii waxa ay macnaheedu tahay. Dad badan ayaa ah kuwo aan hubin, tani waa wax aan caadi ahayn.
Marka ay timaaddo lacag badan, dadkaas waxay rabaan inay ilaaliyaan naftooda iyo sidoo kale suurtogalka. Sidaa darteed aad hubaal tahay inaadan qaldanayn oo waxaad arki kartaa in ay si dhaqso ah dib ugu bixin karaan deynta. Sidaa darteed deyntu ma ahan mid aad u dheer oo runtime ah. Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad aqbasho qeybaha sare. Faahfaahin dheeraad ah ka hubi bangigaaga ama internetka. Waxay ku farxi doonaan inay ku siiyaan macluumaadka dhammaan su'aalaha, waad arki doontaa. Lacagta iyo deynka waa in had iyo jeer la xusuusto. Haddii isbedelka dulsaarka dulsaarka la sameeyo waqti ka dib, waa in la weydiiyaa sababta ay taasi u dhacday. Qofku wuxuu mar walba weydiin karaa qof xiriiriye ah haddii ay jiraan dhibaatooyin deynta. Xaddidaadda saamiga lafteeda maanta waa yar tahay inta badan. Si kastaba ha noqotee, dad badan oo intooda badani waxay ka fakarayaan deyn iyo sidoo kale waxay u maleynayaan in tani ay tahay munaasabada ugu dambeysa ee iyaga loogu talagalay. Sidaa darteed waa inaad had iyo jeer hubisaa in aad sidoo kale isku dheelitirtay dhinacyada oo dhan iyo malaha xataa inaad qaadato deyn gaar ah. Kuwani badanaa waa kuwo aan daneyneyn, waxaana jira deyn saafi ah oo la bixiyay.
Maqaalka xigtaWicitaan credit